China acryli ntekwasa faiba glaasi ákwà rụpụta na Factory | Jiashun
Acryli ntekwasa iko eriri ákwà nwere magburu onwe ihu igwe na-eguzogide, elu okpomọkụ na ultraviolet radieshon. O nwekwara usoro ihe nkiri dị mma na ihe ndozi, ọ bụkwa na-adịghị egbu egbu, na-enweghị isi na gburugburu ebe obibi. Acryli ntekwasa iko fiber akwa ekwe ka ndị ọrụ na-ebipụ, ikwa na onu ọzọ n'ụzọ dị irè.
Usoro mkpuchi ịkpa ákwà (Acrylic coated) na-eme ka akwa ahụ sie ike ntakịrị iji belata ọnụọgụ nke oge a. The ikpa-mkpọchi okokụre faiba glaasi ákwà na-enyere onye ọrụ igbutu, ikwa na ntụ oghere ndị ọzọ ውጤታማd.
Inggbado ọkụ blanket
Fire ụzọ / Fire ákwà mgbochi
Usoro nchịkwa ọkụ ndị ọzọ
1. Q: Kedu maka ụgwọ ihe nlele ahụ?
A: Nso nso sample: n'efu, ma ibu ga-anakọtara ngwaahia sample: mkpa sample ụgwọ, ma anyị ga-nkwụghachi ma ọ bụrụ na anyị ofu ukara iwu mgbe e mesịrị.
2. Q: Kedu maka oge nlele?
A: N'ihi na ẹdude samples, ọ na-ewe 1-2 ụbọchị. Maka ngwaa ahaziri iche, ọ na-ewe 7-10days.
3. Q: Ogologo oge ole ka mmepụta oge na-eduga?
A: Ọ na - ewe ụbọchị 15-30 maka MOQ.
4. Ajụjụ: Ego ole bụ ego ibu?
A: Ọ dabeere na iji qty na-ebupu ụzọ! Zọ mbupu dịịrị gị, anyị nwere ike inye aka gosipụta ego sitere na nke anyị maka ntụnye aka gị ma ị nwere ike ịhọrọ ụzọ dị ọnụ ala maka mbupu!
Nke gara aga: blanketị ọkụ
Osote: PTFE ntekwasa faiba glaasi akwa